Uyenza njani uLuhlu lwe-HTML kwiNoteepad
NguBud E. Smith
Ukubandakanya uluhlu kumaphepha akho eWebhu kuyilo olulungileyo. Izintlu zinomdla wokujonga, kulula ukuskena, kwaye zikukhuthaze ukuba ubhale amabinzana amafutshane, anepunchy. Landela la manyathelo ukwenza uluhlu kwincwadana yokubhalela:
1Yongeza isicatshulwa kuluhlu lwakho kwiincwadana.
Uxwebhu oluboniswe apha, nantsi into echwetheziweyo:
Ukuba udibana neziqinisekiso zintathu zilandelayo, eyona nto ibaluleke kakhulu kuqala, unokulungela ukuba lilungu leKlabhu yeHockey yeDeath Valley:
Iminyaka esi-8 ukuya kweli-12 ubudala. I-Death Valley Hockey Club inamantombazana aneminyaka eli-8 ukuya kweli-12 ubudala njengamalungu. Kuya kufuneka ubengu-8, 9, 10, 11 okanye 12 nge-1 kaJanuwari walo nyaka.
Kulungile esikolweni. Sifuna ukuba usibonise ukuba ungumfundi olungileyo, kwaye ugcine ukuma kwakho kwezemfundo lonke ixesha lakho kunye nathi.
Amanye amava ezemidlalo. Sinqwenela ukuba namava ezemidlalo acwangcisiweyo angaphambili kuwo nawuphi na umdlalo.
MbiniUjikeleze imigca eya kwenza uluhlu kunye neethegi zoluhlu,
Uluhlu olungabhaliswanga (oluneebhulethi), okanye
Uluhlu olu-odolwe (olunenombolo).
Kumzekelo, ifayile ye-
ithegi iye ngaphambi komgca oqalaIminyaka esi-8 ukuya kweli-12 ubudala, kwaye i
Ithegi emva kwexesha elilandela la magamakuwo nawuphi na umdlalo.
3Cwangcisela into nganye yoluhlu kunye
Kuxwebhu lomzekelo, i
ithegi ihamba phambi kwemigca eqala:
Iminyaka esi-8 ukuya kweli-12 ubudala
Amanye amava ezemidlalo
Ngemigangatho emitsha enjengeXML kunye neXHTML endaweni, ithathwa njengefom elungileyo ukusoloko uvala iithegi, oko kuthetha ukuba ngoku kuyacetyiswa ukuba usebenzise ukuvala
ithegi emva kwento nganye. Eli licebiso elilungileyo, kodwa akukho xesha laneleyo lokwenza konke umntu angathanda ukukwenza, kwaye le ngcebiso inokuwela kolo luhlu.
4(Ngokuzithandela) kuludwe olunebhulethi, tshintsha isitayile sebhulethi ngokongeza into eyongezelelweyo, ebizwa ngokuba luphawu, kuyo nganye
ivelisa isangqa esizalisiweyo okanye imbumbulu.
ivelisa isikwere, kwaye
, isangqa esivulekileyo
5Gcina uxwebhu lwakho longeza .htm kwigama lefayile, ukuba uyaligcina okokuqala, kwaye ulivule kwiWebhu yewindows (okanye uvuselele iwindow ukuba sele unalo olu xwebhu luvulekile).
Uluhlu lubonakala kwiphepha leWebhu elihleliweyo.
iziphumo ebezingalindelekanga ze5 htp
ungasela utywala ngelixa uthatha i-gabapentin
i-clindamycin yomqala obuhlungu